कथा जस्तै लाग्ने यथार्थ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / कथा जस्तै लाग्ने यथार्थ
कथा जस्तै लाग्ने यथार्थ
Posted by: युगबोध in विचार September 12, 2018	0 154 Views
आय आर्जनका लागि आफ्नो दे शभन्दा बाहिर गएर शारीरिक तथा मानसिक श्रम गर्ने कार्यलाई वै दे शिक रो जगार भनिन्छ । विश्व बजारमा वै दे शिक रो जगारीको लागि विभिन्न दे शका जनशक्तिहरु खपत हुने गर्दछन् ।
वै दे शिक रो जगार तथा प्रवद्र्धन बो र्डको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ सालमा तीन हजार छ सय पा“चजनाबाट औ पचारिकरुपमा शुरु भएको वै दे शिक रो जगार आजको दिनसम्म आइपुग्दा रो जगारीको पहिलो र अन्तिम विकल्प सावित भएको छ ।
बाह्र वर्षअघि प्रत्ये क दिन पा“च सय ने पाली वै दे शिक रो जगारीको लागि जाने गरे को तथ्यांक थियो  । उक्त समयमा हरे क दिन पा“च सय युवा मनमा विभिन्न सपनाहरुको खे ती गर्दै विदे शिदा सपनाहरुको बीच समयमै अवसान भएर दै निक दुईवटा शवहरु भित्रिने अनुमान गरिन्थ्यो  । तर खुला सीमा पार गरे र कति ने पाली युवा युवतीहरु कामको खो जीमा छिमे की दे श भारतमा गइरहे का छन् र कतिको मृत्यु हुने गर्छ भन्ने कुराको ले खाजो खा छै न ।
वै दे शिक रो जगारीको लागि जाने हरुको संख्या दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ । बाह्र वर्ष अघिको औ सत प्रतिदिन पा“च सय संख्या अहिले बढे र पन्ध्र सय पुगिसके को छ । यसरी पन्ध्र सय युवाहरुले वै धानिक रुपमा श्रम स् वीकृति लिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस् थलको प्रयो ग गरी ने पाली आकाश छो ड्दा अन्य थुप्रै युवाहरु अवै धानिक बाटो को प्रयो ग गरी विदे शिने गरे का छन् तर यसको कुनै तथ्यांक छै न ।
दै निक औ सत पन्ध्र सय ने पाली विदे शिदा प्रतिमहिना ४५ हजार तथा वार्षिक पाच लाख ४० हजार ने पालीले खाडीमुलुक तथा अन्य थुप्रै दे शहरुमा श्रम बे च्नको लागि आफ्नो प्यारो मातृभूमि छो ड्न बाध्य हुने गर्दछन् ।
ने पालको वर्तमान अर्थतन्त्र यिनै विदे शिएका ने पालीहरुले पठाएको रे मिट्यान्सले धानिरहे को छ । उनीहरुको परिवारको जीवनयापनमा सुधार आएको छ, छो राछो रीलाई उज्ज्वल भविष्यको लागि राम्रो विद्यालयमा पढाएका छन् । भनौ ं, आफ्नो परिवार सुखदुःख गरे र धानिरहे का छन् । आफू खाडी मुलुकमा त्यो गर्मीमा पसिनामा डुबे र भए पनि दे शको अर्थतन्त्रलाई डुब्नबाट जो गाएका छन् ।
ने पाली कामदारहरु सा“च्चिकै कठो र परिश्रमी छन् । आफ्नो दे शमा रो जगारीका कुनै पनि अवसरहरु नह“ुदा उनीहरु पलपल पीडा सहे र पनि आफ्नो परिवारलाई खुशी पारे का छन् । जे नते न को हीले घडे री जो डे का छन्, को हीले घर बनाएका छन् । परिवार तथा आफन्तलाई एकसरो लुगाफाटा फे रिदिएका छन्, गाउ“घर उज्यालो बनाएका छन् ।
हाल खाडी मुलुकहरुलगायत एक सय ५३ मुलुकमा वै धानिकरुपमा श्रम स् वीकृति लिएर ने पाली कामदारहरु रो जगारीको लागि जाने गरे का छन् । यसरी रो जगारीको लागि विदे शिने युवाहरुको विदे शी जीवनयापन भने निकै कष्टकर हुने गरे को छ । तर उनीहरुको समस् या समाधानको लागि कुनै पनि प्रयास भएको पाइ“दै न । दे श बरु उनीहरुले पठाएको रे मिट्यान्सले चलिरहे को छ ।
वै दे शिक रो जगारीको लागि जाने हरुमध्ये अहिले करिब ६० लाख युवा जस्तो सुकै कामको लागि पनि विदे श जाने गरे का छन् । तीमध्ये एक प्रतिशत युवा मात्र दक्ष र सीप भएका छन्, बाकी २४ प्रतिशत अर्धसीप भएका र ७५ प्रतिशत युवाहरु कुनै पनि सीप नभएका हुने गरे को तथ्यांक छ ।
सरकारले मले सियालगायत खाडी मुलुकहरुमा जाने कामदारहरुको लागि फ्रि भीसा–फ्रि टिकट (शून्य लागत) को ब्यवस्था गरे पनि यो पूर्णरुपमा व्यवहारमा लागु गर्न सके को छै न । म्यानपावर कम्पनीहरुले अहिले पनि सो झा साझा बे रो जगार युवाहरुलाई राम्रो दे श अनि राम्रो कम्पनीमा पठाइदिने भन्दै चर्काे शुल्क असुल्ने गरे का छन् । कागजी रुपमा उनीहरुले थो रै रकम लिएको दे खाए पनि खाडी मुलुुकहरुमा पठाएवापत लाखौ ं रुपै या“ असुल गर्ने गरे को पाइन्छ । यतातिर पनि छिट्टै सरो कारवालाहरुको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
आफ्नो दे शमा राजनीतिक अस् िथरता भएको र कुनै पनि रो जगारीका अवसरहरु नपाएपछि युवाहरु म्यानपावर कम्पनी र तिनका एजे न्टहरुलाई लाखौ ं रुपै या“ तिरे र विदे शिन बाध्य हुने गरे का छन् । विदे शमा पुगे र फो हो र, कठिन र जो खिमपूर्ण मानिने कामहरुमा संलग्न हुने गरे को पाइन्छ । घरे लु कामदारको रुपमा काम गरिरहे का ने पाली चे लीहरु भने शारीरिक, मानसिक तथा बलात्कार जस् ता जघन्य हिंसाको पनि शिकार बन्ने गरे का छन् ।
हालै को तथ्यांक हे र्ने हो भने विदे शी भूमिमा रो जगारीको लागि गएका युवाहरुमध्ये औ सत दै निक दशजनाको विभिन्न कारणले मृत्यु हुने गरे को छ । पछिल्लो एघार वर्षको तथ्यांकलाई नियाल्दा रो जगारीको खो जीमा विदे शिएका नौ हजारभन्दा बढी ने पाली कामदारहरुले विदे शी भूमिमा ज्यान गुमाइसके का छन् ।
पछिल्लो समय वै दे शिक रो जगारीको लागि सबै भन्दा बढी मले सियामा ने पाली कामदार माथि असुरक्षा बढे को भन्दै ने पाल सरकारले तत्काल त्यहा“को लागि श्रम स् वीकृतिमा रो क लगाएको छ । मले सियापछि साउदी अरब, कतार, युएई र कुवे तमा धे रै ने पाली कामदारहरुले ज्यान गुमाउने गरे का छन् ।
अधिकांशको निधन काम गर्ने सिलसिलामा दुर्घटनामा परे र, सडक दुर्घटना, सुतिरहे को बे ला, हत्या, प्राकृतिक मृत्यु, बिरामी भएर, अज्ञात मृत्यु, हृदयघात र आत्महत्याबाट हुने गरे को छ । अंगभंग भएर, मानसिकरुपमा कमजो र भएर कति घर फर्किन्छन् भन्ने कुराको खासै तथ्यांक पाइ“दै न । यसरी घर फर्किने व्यक्तिहरुको परिवार तथा उसको भावी जीवनमा कस् तो अप्ठ्यारो पर्छ हो ला भने र सम्बन्धित निकायले सो चे को हो ला कि नहो ला ?
यस् तै गार्जियन पत्रिकाको अनुसार सन् २०२२ मा कतारमा आयो जना हुने फिफा विश्वकप फूटबल खे लको लागि रंगशाला निर्माणमा कार्यरत ने पाली कामदारहरुमध्ये हालसम्म करिब चार सय जनाले ज्यान गुमाइसके का छन् । स् वदे श फर्किने मध्ये धे रै मा मृगौ लासम्बन्धी समस् या दे खिएको छ । कुनै पनि सीप नसिके र विदे शिने कारणले झन बढी समस् याहरु झे ल्नुपरे को छ । सम्बन्धित दे शको भाषा, नीतिनियम आदि बारे मा ज्ञान नहु“दा पनि ने पालीहरुले दुःख पाउने गरे का छन् ।
ने पालमा भएको युवा जनसंख्याको उभारको निकास अहिले वै दे शिक रो जगार बन्न पुगे को छ । नत्र श्रम बजारमा वार्षिक भित्रिने करिब छ लाख युवा र विद्यमान शिक्षित, अर्धशिक्षित र अशिक्षित युवा बे रो जगारको चापले हुने बिस् फो टलाई कसै ले टार्न सक्ने थिएन । जसलाई पुष्टि गर्दै अर्थशास् त्री जस् िटल लिनले ‘युवा विष् फो टः विकासशील दे शहरुमा जनसांख्यिक लाभांश र जनसांख्यिक बम्ब ’ शीर्षकको ले खमा ले खे का छन्– ‘व्यापक युवा जनसंख्या भएका विकासशील मुलुकहरुमा युवाले उचित अवसर, सम्मानित श्रम र सन्तो षजनक आय पाउन सक्ने अवस् था भएन भने युवा उभार जनसांख्यिक लाभांश हो इन जनसांख्यिक बम्बको रुपमा परिणत हुन्छ । जहा“ असन्तुष्ट युवा शक्ति सामाजिक र राजनीतिक अस् िथरताको स्रो त र कारक दुबै बन्छन् । बढ्दो युवा उभारलाई बम्बको रुपमा परिणत हुन नदिन सरकारले बे लै मा विचार गर्नुपर्ने दे खिन्छ ।’
युवाहरु स् वदे शमै स् वरो जगार हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ । उनीहरुको चौ तर्फी विकास, राज्यको सबै निकायमा पहु“च पु¥याउने तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस् कृतिक विकासमा युवाहरुको सहभागिता बढाउन सक्नुपर्छ ।
विदे शिएका र स् वदे शमै रहे का सबै युवाहरुलाई बृहत् कार्ययो जना बनाएर स् वदे शमा नै बस् ने वातावरण मिलाउन सबै सरो कारवालाहरु जुट्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी निकायबाट युवालाई स् वदे शमै यो गदान गर्नसक्ने , युवाका पसिना स् वदे शमै सिञ्चित गर्ने वातावरणको लागि ठो स कदम चालिनुपर्छ । कृषिलगायत अन्य सबै क्षे त्रमा युवालाई लक्षित गरी विशे ष लगानीका प्याके ज र अनुदानको व्यवस् था गरिनुपर्दछ । राजनीतिमा उचित अवसर दिइनुपर्दछ । विद्यालय तहदे खि नै सीपमूलक शिक्षाको व्यवस् था गरी श्रमलाई सम्मान गर्ने संस् कृतिको निर्माण गर्नु पर्दछ ।
वै दे शिक रो जगारीले बे फाइदा मात्रै गरे को छ भन्ने आशय चाहि हो इन । दै निक हजारौ ं युवाशक्ति विदे शिदा उनीहरुले ने पालमा पठाउने रे मिट्यान्सले दे शको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण यो गदान पुगे को छ । यही अवस् थामा यदि बे रो जगार युवाहरु दे शभित्रै रहे भने उनीहरुको ब्यवस् थापनमा समस् या दे खापर्छ साथसाथै दे शमा भित्रिने विप्रे षणमा पनि कमी आउछ । जसको कारण ने पाली अर्थतन्त्र ओ रालो लाग्न पुग्छ । तर यसको अर्थ यो हो इन कि भएका जति सबै युवाशक्तिलाई विदे श पठाएर बृद्ध र बालबालिकाहरुको दे श बनाइनुपर्छ ।
सके सम्म दे शको युवाशक्तिलाई दे शभित्रै व्यवस् थापन गर्न सक्ने सरकारी नीति हुनुपर्छ । सके सम्म स् वदे शभित्र रो जगारी दिनुपर्छ । उनीहरुले स् वदे शमै रो जगारी पाउन थाले भने को ही पनि रहरले विदे शीदै नन् । यदि को ही विदे श नै जान चाहन्छ भने पनि उसलार्ई सम्बन्धित दे शको नीतिनियम, हावापानी, भाषा र कामको बारे मा पूर्णरुपमा जाने र, बुझे र, सीप सिके र जाने व्यवस् था मिलाउनुपर्छ । ने पालबाटै दक्ष र सीपयुक्त भएर विदे श जा“दा त्यहा“ हुने सम्भावित दुःखबाट बच्न सकिन्छ ।
यति हुन सक्यो भने लाइन लागे र विदे श जाने युवाहरु यहीं के ही गर्नुपर्दछ, यही के ही गर्ने अवस् था छ भने र अग्रसर हुन्छन् । जसले बढ्दो युवाशक्ति पलायनलाई रो क्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
के ही दशक अघिसम्म ने पालकै अवस् थामा रहे का दे शहरुले विकासमा ठूलै फट्को मारिसके  । हाम्रो दे श भने बे रो जगार व्यक्ति उत्पादन के न्द्र बन्न पुगे को छ । दे शको अर्थतन्त्र रे मिट्यान्सकै भरमा पर्ने अवस् था आउन दिनुहुदै न । मुलुक रे मिट्यान्सकै भरमा कति समय पो चल्न सक्ला र ? अब चाहि सबै ले आ–आफ्नो क्षे त्रबाट वै दे शिक रो जगारीको विकल्प खो ज्नतिर पो ध्यान दिने हो कि ?
Previous: प्रतिष्ठान सञ्चालनको बाटो सहज बन्दै , प्रतिष्ठान र अस्पताल ‘अख्तियारी’ को पर्खाइमा
Next: दल, दलाली र देश !